McFIT - astaan ​​cusub, muuqaal cusub > Vielhuber David
McFIT - astaan ​​cusub, muuqaal cusub06
Silsiladda jirdhiska dhimista ee 'McFIT' ayaa iskeed isu siisay. In kasta oo mascot huruud ah oo qaab moos ah u sharraxay xarafka buluugga ah, qaanso jaalle ah oo ku taal asalka midabka anthracite ayaa hadda si xirfad leh isugu xardhay midba midka kale sidaasna ay ku samaysan tahay qaab aan la taaban karin. Midabada FDP midab buluug iyo jaalle ah siiso maahan oo kaliya astaanta, laakiin sidoo kale dhammaan waxyaabaha kale ee daabacaadda nooca 'McFIT' ah.
Waxaan shaki urur aan lama filaan ah iyadoo shukumaanno waxaa loogu tala galay ay ku abuuray ah xarrakada hay'adda. Weli, waxaan u arkaa astaanta inay tahay tallaabo geesinimo leh. Dareenka ayaa ah mid xiiso leh. Xaqiiqda ah in wax kasta laga fikiray ayaa sidoo kale lagu arki karaa la qabsiga higgaadda laga soo bilaabo "McFit" ilaa "McFIT" - laga yaabee in astaanta lagu dhejiyo saldhig ballaaran.
Silsiladda jirdhiska guud ahaan waxay rabtaa inay ka guurto qiimo jaban una wareegto muuqaal qiimo sare leh - iyadoo la jaan qaadayo khibradaha cusub ee tababarka McFIT Marka lagu daro aqoonsiga shirkadeed oo dhameystiran, qiimaha sidoo kale waa la beddelay oo lagu kordhiyay € 3.00 habeenkii. Ka dib oo dhan, waxaad hadda ku qubeysan kartaa bilaash.
Sidoo kale waxaa xusid mudan ololaha cusub ee Twitter - kaas oo faux pas yar yar laakiin muhiim ah ku dhacay kooxda suuq geynta. Hashtag #derwilleindir waxaa lagu soo bandhigayaa boodhadh kala duwan oo leh boosas (malaha aqrin wanaagsan). Dhibaatada: Hada waxaa sii kordhaya tweets la hashtag #der . Sidee wax u dhigaysaa.
Ololaha cusub ee Twitter